Laga soo bilaabo La -Bixiyay Taleefonka Lacag La'aan Maktabad Yar oo Lacag La'aan ah • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Laga soo bilaabo Lacag Bixinta Lacag -Bixinta Maktabad Yar oo Bilaash ah
Baabuur wadista South Grand iyada oo loo sii marayo Dutchtown, waxaa laga yaabaa inaad dareentay taleefanka lacag-bixinta oo muddo dheer taagan oo hor taagan guriga xaraashka ah ee 4018 South Grand, oo koonfur ka ah Canabyada Merb. Iyada oo telefoonnada lacag -bixinta oo ku dhowaad bakhtiyey, waxaa hubaal ah in ay soo jiidato indhaha qof kasta oo weli xusuusta waxa uu ahaa taleefoonka lacag -bixintu.
Deganaha Dutchtown Ben Cohen wuxuu arkay fursad uu dib ugu soo celin karo nockgic nok si wax loo keydiyo relic halka sidoo kale qiimo la siinayo bulshada. Cohen wuxuu u dhaqaaqay inuu ka rogo xidhitaankii taleefankii hore ee lacag bixinta maktabad yar oo lacag la’aan ah. Benjamin Thomas iyo tiro yar oo mutadawiciin ah oo xaafadda ka tirsan ayaa Cohen iska kaashaday fiidnimadii Jimcaha ee u dambaysay si ay u dayac -tiriyaan taleefoonka una siiyaan heshiis cusub nolosha.
Thomas wuxuu badbaadiyey alwaax wuxuuna ka helay Goodwill balaastik cad oo cad iyo taleefan gacmeed duug ah si loo abuuro albaab daaqad leh oo loogu talagalay. Kooxda ayaa isku soo ururisay albaabka waxayna ku dartay jaakad cusub oo rinji ah.
Dhul -beereed aan la garanayn ayaa yimid goor dambe si uu u nadiifiyo haramaha iyo geedaha kale ee ku xeeran taleefanka iyo afaafka hore ee guriga, oo bannaanaa tan iyo ugu yaraan 2015. Diiwaanka magaalada ayaa tilmaamaya in ruqsadaha dhismaha iyo korontada dhawaan laga bixiyay 4018 South Grand, sidaas darteed waxaan rajeynayaa in ka badan kaliya taleefanka lacag -bixinta ayaa arki doona dib -u -hagaajin cinwaankan.
Waqtigan xaadirka ah, maktabadda yar waxaa lagu hayaa buugag lacag la'aan ah oo lagu qaado. Cohen wuxuu kaloo rajaynayaa inuu sanduuqa ku kaydiyo cunto fudud oo aan baaba'ayn iyo waxyaabo kale oo loogu talagalay dadka deriska ah ee u baahan oo ku lifaaqan hagaha kheyraadka ee aan cimilada caddayn si looga caawiyo dadka inay helaan adeegyo. Xitaa waxaa jira hadal ku saabsan rakibidda miis, kuraas, iyo meel kulul oo wi-fi ah si loo siiyo isku xirnaanta kuwa galaangalka xaddidan leh.
Maktabado Yar Yar oo Bilaash Ah
Tani ma aha maktabad yar oo lacag la'aan ah oo ugu horreysa oo ku taal Dutchtown. Thomas, oo deggan Dutchtown qiyaastii afar sano, wuxuu kaloo ka shaqeeyey saddex maktabadood oo kale oo ku yaal xaafadda: mid ku yaal dhammaadka koonfureed ee Laclede Park, mid ku yaal isgoyska Chippewa, Broadway iyo Jefferson oo u dhow Mashruuca Farshaxanka ee South Broadway, iyo mid u dhow joogsiga baska koonfur -galbeed ee Grand iyo Bates Street. “Waxaan isku dayayaa inaan xaafadda waxoogaa ka roonaado,” ayuu yiri Thomas, oo si joogto ah ugu soo celiya maktabadaha buugaag loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn, iyo sidoo kale midabaynta buugaagta, qalimaanta, iyo sahayda kale ee farshaxanka.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira maktabado ku yaal Minnie Wood Memorial Square oo ku yaal Broadway iyo Meramec, iyo sidoo kale Beerta VAL ee Virginia Avenue. Beerta VAL waxay kaloo leedahay “bakhaar yar oo lacag la’aan ah” oo ay derisku kula wadaagi karaan cuntada iyo waxyaabaha kale ee bilaashka ah qaadashada.
Thomas wuxuu rabaa inuu arko in badan oo ka mid ah bakhaarradii soo baxay, wuxuuna rajaynayaa inuu gacan ka geysto dhisitaanka mid ku xiga maktabadda taleefanka lacagta. Iyada oo xoogaa dulsaar ah iyo deeq joogto ah, wuxuu jeclaan lahaa inuu arko bakhaarka oo si joogto ah loogu keydiyo alaab daryeel shaqsiyeed kuwa u baahan.
Cohen iyo Thomas waxay rajaynayaan inay ballaariyaan adeegsiga maktabadaha yar -yar iyagoo kobcinaya shabakad mutadawiciin ah si ay u kaydiyaan una ilaaliyaan. "Dhowr qof oo ilaaliya maktabadaha waxay tilmaameen inay ku adag tahay inay kaydiyaan," ayuu yidhi Cohen, "waxaanna u malaynayaa in kobcinta shabakad mutadawiciin ah ay gacan ka geysan karto yareynta culeyskaas iyo kordhinta taageerooyinka gargaarka wadaagga ah." Haddii aad xiisaynayso ku -deeqidda waqti ama ilo, nala soo xiriir markaa waxaan kugu xiriirin karnaa Cohen, Thomas, iyo mutadawiciin kale.
Qayb ka mid ah Hawlgal Balaadhan: FreeSource
Cohen's wuxuu leeyahay waayo -aragnimo badan oo kale oo siisa jaarkiisa agabyo la heli karo. Isagu waa aasaasihii FreeSource, aan macaash doon ahayn oo leh hadaf lagu xoojinayo dadka dakhligoodu hooseeyo ama aan lahayn si loogu xiro fursadaha kheyraadka xirfadaha iyo bulshada. FreeSource waxay kaloo bixisaa barnaamijyo kala duwan si kor loogu qaado helitaanka tiknolojiyadda kuwa u baahan.
FreeSource ayaa keenta Kafateeriyada Taageerada Tech ilaa Thomas Dunn Xarunta Waxbarshada si joogto ah. Café Support Tech wuxuu hayaa saacado furan oo dadku ku caawin karaan dhibka farsamooyinka farsamaynta, wax badan ka baro sida loo adeegsado aaladooda, iyo helitaanka aqoonta ku saabsan adeegsiga teknolojiyadda loo dhan yahay. Barnaamijka waxaa loogu talagalay inuu bixiyo taageero isku faca ah, laakiin sidoo kale waxaad u badan tahay inaad ka heli doonto Cohen halkaas oo la wadaagaya khibradiisa taageero farsamo ee baaxadda leh.
Mashruuca Applecart waa mashruuc kale oo FreeSource oo ujeedadiisu tahay in la siiyo gelitaanka intarneedka iyo adeegyada kale ee guurguura deriska aan la degin. Iyada oo qayb ka ah hadafka FreeSource si ay ula kulmaan dadka halka ay joogaan-jir ahaan, farsamo ahaan, iyo duruufo ahaan-Mashruuca Applecart wuxuu dib u soo celin doonaa kaaryoontii si loogu daro meel kulul oo wi-fi ah, saldhig lacag lagu shubto, iyo sahay iyo agabyo kale oo la keeni karo halka ay dadku joogaan u baahan in la isu yimaado.
Cohen wuxuu rajaynayaa in uu gaadhi -yaasha keeno meelo maktabad yar oo lacag la’aan ah sida taleefanka lacag -bixinta oo taagan South Grand. "Dadka jidka maraya ayaa fadhiisan kara oo taleefanadooda ka qaadi kara oo kaliya akhrin kara buug," ayuu Cohen soo jeedinayaa, "dadka ka socda qaybaha kala duwan ee nolosha waxay heli karaan fursad ay isku bartaan." Haddii aad xiisaynayso inaad kaqaybqaadato dhinac farsamo ama wacyigelin, ku biir Kooxda Facebook ee mashruuca Applecart.
Haddii aad jeceshahay inaad taageerto shaqada Cohen iyo FreeSource, waad awoodaa halkan ku deeq, ha ahaato mid lacageed ama qaab farsamo cusub ama la isticmaalay. Iyada oo ay jiraan mashaariic badan oo ku jira shaqooyinka, waqtigaaga, lacagtaada, iyo sahaydaada ayaa kaa caawin kara sii wadida hadafka FreeSource ee keenista teknolojiyadda iyo kheyraadka derisyada leh helitaan xaddidan.
Filimka hoos Dutchtown. Muuji dhamaan qeybaha. Dutchtown, CID -da Dutchtown, Iyo Fursadaha Tabaruca. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay August 23rd, 2021 .
DutchtownSTL.org Dutchtown Laga soo bilaabo Lacag Bixinta Lacag -Bixinta Maktabad Yar oo Bilaash ah